Home Love Story Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 3aad
Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 3aad
Axsan shaacir waad ka ka baxsatay Farxaan oo soo buraarugay isla markaana waxa uu sheegay haddii dib loo weydiiyana aan sheegi Karin ayaa yiri.
Maxaa tiri Fartuun
Waxba Farxaan intii aan rabay waan helay dhabtiina waan hubaa in qabiir aad tahay warqada inta kale waan ku filanahay wixii xagiisa iga qabsata waan kula soo socod siinayaa.
Markiiba albaabka ayaa ay ka baxday Farxaan waa uu jeclaan lahaa in ay inta kaga harto arrintaan xanuunka gaarka ku ah oo aan cidna la ogeyn.
Fartuun warqadadeedii ayaa isku daba ridatay waxayna galabtii dambe ay ula tagtay Ayaanle oo ay gudoon siiyey una sheegtay in ay jawaab ka sugeyso.
Tani farxadii Fartuun ayaa ay aheyd iyadoo dhinaca kala uu niyadjab taagnaa Farxaan balse qalbigiisa uuu qaadan waayey inuu guuldarada ogolaado.
Ayaanle oo ahaa nin isla weyn ma uusan ku dhicin inuu warqadii loo dhiibay uu muhiimad gaar ah siiyo dabeyshiisana waxaad mooday in aysan la dhacsaneyn Fartuun oo uu u arkayey in ay aheyd qof aan isaga nolosha furan la fahmi Karin.
Haddii Fartuun uu xaalkeeda ahaa jawaab suge waxaad moodaa in dhinaca kale Amina Sahra in ay talaabtii ugu dambeysay ee nolosheeda ay qaadeyso oo ay caawa noqoneyso ninkey weligeed ku hamineysay xaaskiisa waa Sadiiq Xaaji waxaana arroos weyn loogu dhigay magaalada London waqooyigeeda kaas oo ay ka soo qeyb galeen dadweyne badan oo soomaali u badan hooyadeed Sareedo & walaasheed Canab ayaa hormuud ahaa qaban qaabada guurkeeda.
Markii ay todabaadkii ugu horeeyey ee guurkeeda ay ka baxday ayaa sida hore loo sii qorsheeyey ayaa ay iyada gacaliyaheedii waxay u ambabaxeen Jasiirada BAKAMOYO ee dalka Tansaniya oo ah meel ay si weyn xiiso ugu qabtay Amina Sahra in ay Mar uun tagto waxayna ku dageen Hotel Pradise oo ah kan ugu wanaagsan jasiirada loo dalxiis tago ee Bakamoya.
Waa subaxii koowaad ee uu waaga ugu baryo Sadiiq & xaaskiisa jasiirada taariiqiga leh ee Bakamoya waxayna subixii ku kalaheen xeebta oo ay qaateen dooni yar oo aad u qurux badan markii ay dalxiiskii bada ka soo noqdeen ayaa waxay is dhaafsadeen hadaladaan.
Gacaliso si aan caadi aheyn ayaan u faraxsan nahay taa ma fahmi kartaa adiga
Haddii aan aniga ku fahmin gacaliye ayaa ku fahmaya mar haddii riyadeena ay rumowday sidoo kalana aan iminka nahay lamaane laabta isku haaya ma farxad ayaa inoo dhiman aniga waan duuli rabaa gacaliye waliba farxada ayaan la duuli rabaa.
Waa runtaa macaanto maxaa yeelay nafteena ayaa isu baahneyd sidoo kale waxaan isu aheyn wehel isu walwaalo manta waxaynu nahay kuwa intii hore iskaga dhow taana waa illaah mahadii.
Macaanka mid ku weydiiyaa mar kasta waxaad I oran jirtay gabadhii riyada manta taa ma ka gudbay oo ma noqday gabadhii runta.
Sadiiq inta uu qoslay ayaa uu yiri
Macaanto qofka waxa uu wax u cunaa waa in uu noolaado lkn aniga waxaan kuu sheegayaa in aad dartaa u noolahay wax walbana nolosha adiga ayaa ii ah I LOVE YOU ALL MY HEART DARLING.
MAASHA ALLAH intaas in ka badan waan kaa kasban doonaa macaane waan hubaa in aan abid ahaaneyno lamaane laabta is geliye oo nolosha aan abid ku kala irdoobin.
Sadiiq inta uu u dhawaaday xaaskiisa oo laabta geliyey ayaa uu ku yiri.
Inshah Allah abid waan ahaaneynaa macaanto naftaan dartaa ayaa ay u nooshahay noloshan qofta kaliya ee aan ka fikiro ayaad ahaan doonaa nolosha adiga ayaa ay kaa bilaabataa kuguna dhamaataa.
Fartuun iyada weli rajo suge ayaa ay aheyd maalmahaan Ayaanle iskuulka maba yimaado ileyn markii horeba waxbarasho doon ma uusan aheyn ee fursada ay nolosha siisay ayaa uu ku faaniyey waxa uuna ahaa Curad Xaaji Bedel oo si weyn xagga ganacsiga magac ugu leh.
Mudo Usbuuc ayaa ka soo wareegatay maalintii ay Fartuun warqada u geysay Ayaanle welina ma uusan furin warqada maalintii dambe ayaa uu is tusiyey inuu warqada furo markii uu aqriyey ee uu fahmay ujeedka gabadha ayuu door biday inuu u deyriyo balse saaxiibkii ayaa kula taliyey inuusan gabadha niyada ka jebin sidii ayaa uuna yeelay.
Talaabtaas Ayaanle marnaba uma qaadin naxariis ama mid uu gabadha ugu qalbi jileecaya ee waxaa sidaa u yeelay inuu Luul ku jebiyo maadaama ay iyada go’aansaday in ay u jarto xiriirkii 2 bilood ee kala dhaxeeyey.
Luul waa gabar wax ka dhigata iskuulka ay wada dhigtaan Ayaanle & Fartuun waxayna mudo 2 bilood ah xiriir la laheyd Ayaanle oo isaga markii hore lahaa hindisaha xiriirkaan iyada ay ka aqbashay balse ay markii dambe ogaaday in uusan aheyn nin xeerinaayo dhaqanka sidoo kale uu waxyaalo aan dhaqan & diin ku wanaagsaneyn kala hadlay.
Ayaanle aad ayaa uu niyadjab ka qaatay waayo marnaba ma qabin in gabar soomaali ah ay isaga diideyso dhaqaalaha uu heysto & jalaqsanaanta ka muuqato ayaa uu isu heystay inuu wax walba ku iibsan karo wallow uusan jaceyl dhab ah abid gabar u qaadin noloshiisa wax walba oo nolol ah xagiisa cayaar ayaa ay ka aheyd waana tan ay Luul ugu dambeyn u go’aansatay in ay xiriirka u jarto.
Galabtii xigtay markii iskuulka uu dib ugu soo laabtay Ayaanle waxay farxad u aheyd tani Fartuun oo aad u dhowreysay jawaabta Ayaanle markii fasalka laga soo baxay ayaa uu Ayaanle meel gees ugu yeeray Fartuun oo uu ku yiri.
Warqadaadii waan aqriyey wana fahmaya ujeedka ka dambeysay
Fartuun oo warka sugi la ayaa la soo booday.
Haye jawaabtii meeyey
Badalkii aan waraaq kugu jawaabi lahaa waxaan door biday in aan afka kaaga jawaabo maxaad ka qabtaa mise warqada ayaad doorbideysaa.
Waa isku key mid walaal ee jawaabtaada maxay noqotay bal ii sheeg
Ma ku fikirtay gacaliso in gabar sidaan u qurux badan isla markaana jaceylkeeda si geesinimo ah u qiratay in la diidayo.
Waa runtaa in aad geesinimo muujiyey laakin jawaabtaada maxay noqotay bal taa ii sheeg
Wax badan ayaan ka fikiray hadalkaaga ugu dambeyn qalbigeyga ayaa go’aamiyey in aan sheeko wadaag ahaano dhabtii waan ku aqbalay.
Dhabtii go’aanka qalbigaaga waa mid aan aad ugu faraxsan nahay walaal waxaanse rajeynayaa in aan ahaano kuwii ka mira dhaliya xiriirkaan manta bilowga ah.
Inshah Allah koley meeshaan waa goob waxbarasho ka waran haddii aan xaafadaada I barto oo maalmo aan isla meel dhigno oo aan arrimaheena ka hadlo.
Fartuun oo aad u soo dhaweysay hadalkaas ayaa tiri
Maasha Allah laf ahaanteyda waan kula qabaa ka waran isla xilligaan hadaan xaafada ku baro ileyn sidaa uguma foga halkaan.
Sidii ayaa la isku raacay waxaana Ayaanle la soo baray xaafada waliba iyada oo u sheegay in habeenada ay kulmayaan ay ku kulmaan gidaar aan sidaa gurigooda ugu fogeyn waxayna ka cudur daaratay in ay gurigooda aysan ku qaabili Karin Ayaanlana waa uu ku raacay sidii ayaa la isku macasalaameeyey.
Fartuun iyada oo farxad la buubyeso ayaa ay abaartay dukaankii Farxaan oo xilligaa keligii ahaa markii ay irida ka gashay ayaa ay tiri.
Waan guuleystay Farxaan waan guuleysantay
Farxaan oo micnaha hadalkeeda durbadiiba gartay ayaa yiri
Waxan u qaatay in jawaab heshay sow sidaa maaha Fartuun
Haa aboowe waliba jawaaab aan ku qanco waana u aqbalay Ayaanle jaceylkeyga
Runtii farxadaada waan soo dhaweynayaa Hambalyo
Mahadsanid Farxaan waliba si qaas ah ayaan kugu mahadcelinayaa maxaa yeelay in aan manta jaceylkeyga ku guuleysto adigaa igu saaciday.
Ma filaayo in aan wax weyn oo aan kugu saaciday ay jirto dadaalka xagaaga ayaa uu ahaa oo go’aansaday in aad jaceylkaaga qirato.
Waxaan aaminsanahay hadaladii macaanaa ee xagaaga ka yimid ee aan warqada ku qoray in ay isaga ka yeeleen inuu I aqbalo.
Fartuun waxba ha is yasin aniga waxaan qabaa inuu isaga nasiibka saaciday haddii uu ku helo waayo gabar caaqilad ah oo karti badan ayaa tahay.
Farxaanoow sidaa oo dhan ha ii xayeysiin haddii aad arki laheyd Ayaanle ima amaanteen sida uu u qurux badan tahay istaalaha waa yaabeysaa.
Fartuuney quruxi waxba maaha manta dunida karti ayaa lagu kala hormaray & dabeecad intaana adiga ayaa leh.
Waad mahadsan tahay mar kale mid ayaan go’aansaday oo aan kula jeclaaday
Haye maxay tahay
Farxaan curadkeyga ayaan rabaa in aan magacaaga siiyo ileyn waad mudan tahay maxaa yeelay waxaad igu caawisay in aan jaceylkeyga helo.
Farxaan oo amakaag ka soo haray ayaa yiri
Ma guur ayaadba diyaar u tahay Fartuuney
Haa maxaa jira Farxaan jaceylka dhabta waa kan guurka ka dambeeyo miyaadan ogeyn ma qiyaasi kartid sida aad ugu hamuun qabo in aan Ayaanle ooridiisa noqdo.
Laakiin guurka waa go’aan culus una baahan si wanaagsan looga baaran dego maxaa yeelay Ayaanle marka hore wax badan ka baro oo iska hubi inuu yahay nin aad noloshaada ku aamini kartid.
Maya maya Farxaan nafteyda been iima sheegeyso Ayaanlana waa midka kaliya ee farxadeydaay nafteyda u qalanta siin kara ma fahamtay.
Farxaan oo quus kii ugu dambeeyey gaaray ayaa yiri
Waan rajeynayaa aniga mar kasta farxadaada ayaa ila weyn
In cabaar ayaa la kala aamusay Fartuun ayaana la soo booday
Waan sii baxayaa manta gabartii shaqaalaha ayaa naga maqan oo howl ayaa xaafada la iiga rabaa waan arkeynaa.
Inshah Allah Fartuun farxad aan dhamaan ayaan kuu rajeyey
Farxaan markii ay Fartuun baxday ayaa uu ilin soo dhaaftay wuxuuna qalbigiisa u sheegay inuu nolosha ku guuldareystay miskiin ma laheyn qof uu dhibkiisa u sheegto ugu yaraan qalbigiisa dajisa saxiibka kaliya ee uu lahaa waxa uu ahaa Xasan Kaafi oo laf ahaantiisa dalka aan xiliigaa ku sugneyd oo xaggaa & Ethiopi jiray.
Farxaan murugtii waa ay la tagtay waxaana xaaladiisa mar kasta xumeysay Fartuun oo xilli walba horumarka uu jaceylkeeda sameeyo isaga u soo gudbineysay dhowr jeer u keentay oo marqaati kaga dhigtay hadiyado uu Ayaanle u keenay Farxaan waali ayaa uu ku dhawaa wax walba waxaa ugu wacnaa hadal la’aanta iyo isaga oo go’aansaday inuu dhibkiisa qarsado.
Isbadalka Farxaan waxaa fahamtay hooyadii oo ugu dambeyn aamusnaantii ay ku jirtay jebisay oo markaan go’aansaday in ay weydiiso waxa dhibka ku haayo ee sidaan oo dhan ugu qayarimay waxayna maalintii dambe ku tiri.
Farxaanoow hooyo maxaa ku helay waa adiga malmahaan xaaladaada wanaagsaneyn ma ganacsiga ayaa dhib kaa heysto ii sheeg hooyo muxuu yahay dhibkaan ku heysto ee dabeecadaada xataa badalay.
Maya hooyo wax ma jiro mashquulka uun ayaa iga baday ee wax kale ma jiraan hooyo macaan
Wiilkeygiyow hooyadaa ayaan ahay dhibkaaga waxaan ahay qoftaad u sheegan laheyd aniga ha I kurbeyn ii sheeg dhib waa uu jiraa intuu la egyahay.
Maya hooyo dhib kasta oo I heysto waa mid aan aniga ku filan nahay hooyo waan xalin karaa sow ma ogid in aan nin weyn ahay.
Waa runtaa nin weyn waa tahay laakiin ogaaw in aan ugu yaraan naftaada dhibka heysto aan talo siin karo haddii aad ii sheegato balse dhib malaha in aadan ii baahneyn ayaan dareemayaa.
Maya hooyo sidaa ha dhihin ehelka kaliya ee aan heysto ayaad tahay waliba hooyo fiican ayaa tahay laakiin Maama ma doonayo in murugta aniga I heysato aan xagaaga u soo raro.
Wiilkeygiyow anigaaba diyaar u ah in aan dhibka kula qeybsado ee ii sheeg
Maama nolosha weligey hami ayaan ka lahaa balse manta taa ayaa dariishada ka baxday oo waan guuldareystay hooyo.